सरकारले थाल्यो फेरि लकडाउन गर्ने तयारी ! यी क्षेत्र बन्द गर्न निर्देशन - jagritikhabar.com
सरकारले थाल्यो फेरि लकडाउन गर्ने तयारी ! यी क्षेत्र बन्द गर्न निर्देशन
काठमाडौं, ३० असोज ।
कोरोना भाइरसको सं’क्रमण बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउनको तयारी थालिएको हो ।तीन हप्तामा तीन लाख भन्दा धेरै संक्रमित देखा परेपछि सरकारले फेरि लकडाउन गर्न लागेको बताइएको छ । त्यहाँको स्वास्थ्य मन्त्रालयले होटल, रेष्टुरेण्ट र बार बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।फ्रान्समा हालसम्म ३२ हजार ७७९ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ लाख ४३ हजार ४७९ जनालाई कोरोना सं’क्रमण भएको छ ।त्यस्तै १ लाख ८२८ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने ६लाख ९ हजार ८७२ जना उपचाररत छन् । त्यस्तै १ हजार ४४८ जनाको स्वास्थ्य अवस्था ग’म्भीर रहेको छ ।
यो पनि:थापाथली स्थित परोपकार प्रसुति गृहमा एक महिलाले पाँच शिशुलाई जन्म दिएकी छन् । सोमबार बिहान नुवाकोटकी २८ वर्षीया सोमिका तामाङले पाँच वटा शिशुलाई ज’न्म दिएको स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ डा. कृतिपाल सुवेदीले जानकारी दिए। पाँच मध्ये चार जना जीवित रहेको र १ जना भने जन्मनु अघि नै मृत्यु भइसकेको उनले बताए ।
सुवेदीको नेतृत्वमा श’ल्यक्रिया मार्फत बिहान मृ,त सहित ५ शिशुको जन्म भएको हो । अहिलेसम्म आमाको अवस्था पनि सामान्य नै रहेको उनले बताए । जीवित शिशु चार छोरी छन्। मृतक शिशु भने छोरा थिए। उनको तौल ३०० ग्राम मात्र थियो । अपरेसनमा संलग्न चिकित्सक कृतिपाल सुवेदीका अनुसार चार शिशु र आमा सबै स्वस्थ छन्। ती शिशु १.८, १.९, १.६ किलोग्राम र ८०० ग्रामका छन् ।
‘पल गायिका काण्ड’ त्यो रात होटलमा जे गर्यो ढोकाको चुक्कुल्ले गर्यो…
रुपनी जि एम । कुरा आजभन्दा ९ वर्ष अघिको हो । जतिबेला म मोफसलमा...
एजेण्टको भरमा भिजिट भिसामा यूएई आएर कमाउँछु भनेर नसोच्नुहोस् !
बुद्धि मगर, हाल यूएई । यतिबेला जताततै चर्चा भिजिट भिसाको छ । नेपालीहरू ठगिएको,...
भरतपुरको मत आँकलन सकियो , रेणु भारि मतले विजयी !
२७ वैशाख, काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकामा मेयरकी उम्मेदवार रेनु दाहाललाई यतिबेला निर्वाचनको धपेडी छ...
मलेसियामा एकैदिन १४० नेपाली कामदार पक्राउ, मलेसिया सरकारले जारी गर्यो सुचना
२८ वैशाख, काठमाडौं । मलेसियाली अध्यागमन बिभाग (इमिग्रेशन) ले मलेसियामा अवैधानिक कामदार र अवैधानिक...
साउदीमा अलपत्र नेपाली युवा भन्छन् : हाम्रो उद्धार भएन भने मर्छौ !
दुखद खबर : जापानको नागोयामा एक नेपाली युवाको निधन
यूएईमा लुटपाटमा संलग्न ६ जनालाई जेल सजाय
साउदी अरेबियाद्धारा साढे ११ हजार बढी विदेशीलाई देशबाट निकाला !
मलेसियामा कोरोनाबाट दुई हजार भन्दा बढी संक्रमित, चार जनाको मृत्यु
क्वाललम्पुर । मलेसियामा गएको २४ घन्टामा २ हजार जना भन्दा बढी कोरोना भाइरसका संक्रमित...
भखरै पूर्वमा गयो ७ म्याग्निच्युडको भूकम्प
युक्रेनमा रुसको आक्रमणमा अहिलेसम्म १३५ बालबालिकाको मृत्यु
अमेरिकी सेनाको जहाज हिजो नेपाल आयो, आज दुर्घटना
अमेरिकी सेनाको विमान दुर्घटना, के छ अवस्था ? थप जानकारी सहित
चर्चामा देशाइको बोल्ड लुक्स्
© सर्वाधिकार जागृति खबर डटकममा निहित सम्पर्क/हाम्रो बारे